Madaxwayne Biixi’ Ma Jiro Jawi Aanu Nimankaa Somaliya Ku Wada Hadli Karnaa Xiligan’ Haday Wax Xukumaana Bal Berbera Ha Yimaadaan | Marsa News
Madaxwayne Biixi’ Ma Jiro Jawi Aanu Nimankaa Somaliya Ku Wada Hadli Karnaa Xiligan’ Haday Wax Xukumaana Bal Berbera Ha Yimaadaan
Hargaisa:(Marsanews) Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi ayaa luuqad adag kula hadlay xukuumadda Soomaaliya ee fadhigeedu yahay Villa Somalia oo Muqdisho ah isaga oo u sheegay in aanay gabi ahaanba xukuumaddaasi xaq u lahayn kana hadli Karin oo ay gardarro tahay in ay ka hadlaan Maal-galinta dekedda Berbera isaga oo dhinaca kalena sheegay in aanay suurto galba ahayn wakhtigan xaaladda lagu jiro darteed wada hadaladii Somaliland iyo Soomaaliya isaga oo sheegay in xaalado adagi ka horreeyaan oo inta ay aqbalayaan ama meel la isla dhigayo darteed aanau wakhtigan munaasab ahayn.
Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi oo arrimahaasi ka hadlayaa waxa uu yidhi: “Qoladaasi Xamar joogtaa waxay diideen in Soomaaliya oo ah qoladii Talyaanigu gumaysan jiray iyo Somaliland ay ahaayeen laba dawladood oo si ikhtiyaari ah oo xor ah wax isugu darsaday 1960-kii. Horta ereygaasi ayay diidaan oo dafiraan. Su’aasho markaa waxa weeyi ma xoog bay ku qabsadeen Somaliland oo way ka adkaadeen oo waa meel ay iyagu qabsadeen. Bal sida ay ku diideen in la ahaa laba dawladood oo isu yimid garan maayo. Nimanka leh Berbera annaga ayaa xukuna am iman karaan.
Talo ay ka taliyaan iska daaye ma iman karaan. Haddii ay iman karaan oo ay cirkeeda iyo baddeeda soo mari karaan haak taliyaan dee haddii kale waa niman iska hawaawiyey. Imika Dekedda Kismaayo ka hadlaan, waxa joogta qoladan Imaaraadka ayaa joogta Kismaayo. Boosaaso way joogaan, ka hadlaan oo ma faro galiyo dee. Waxa ay ahayd in aynu ahaano laba dawladood oo jaar ah oo is ixtiraama. Aniguna sidaasi ayaan qabaa. Wixii naga dhaxeeyaana walaaltinimo ha ahaato.
Madaxweynaha Somaliland Md. Muuse Biixi Cabdi waxa uu sheegay in ay ka go’an tahay in ay Somaliland hir gelin doonto heshiiskaasi saddex geesoodka ah ee maalgashiga Dekedda Berbera cid is hor taagi kartaana aanay jirin qolada Muqdisho ka hadlaysaana yihiin waraabe dharaar ciyey, isaga oo arrimahaasi iyo wada hadalkii Somaliland iyo Soomaaliya ka hadlayaana waxa uu yidhi: “Heshiiska waa la socodsiinayaa. Waanu hirgelayaa oo sidaa uu yahay ayuu ku soconayaa.
Ama annaga ayaa been sheegayna oo waxba socodsiin kari waayi oo iyaga ayaa na qabsan ama iyaga ayaa dameer ciyey iska noqon oo halkooda ka hadli. Waanu soconayaa. Ha yimaaddo ka nagu qabsanayaa. Haddii ay dawladaha carabta u cabteen annana waraaqo waannu u qornay dhamaan intaa ururro caalami ah iyo dawladahasi oo dhan waannu u qornay waraaqo.
Waxaanu ka hadalnaa annagu xorriyaddayada iyo deelqaafka ah annaga oo laba dawladood oo wax isku darsanay ah oo kala baxnay in ay dhinac kali ah aqoonsadeen ayaanu u sheegnaa in ay qalad tahay.
Laab dawladood baanu ahayn waanu isku nimid waanan kala baxnay. Xaaladdan imika taagani mid saamaxaysa maaha in lagu wada hadlo oo dee halkaasibaa la kala joogaa laakiin wada hadalka bani aadamku mar walba wada hadal buu wax ku dhammaystaa. Wada hadal buu ku dhammaadaa wixiisu. Waa la is dilaa buuq kasta ayaa dhaca, hadal uunbaa ka dambeeya iyo in la wada hadlo. Markaa in wada hadal dhici doono oo mar uun la isugu iman doono miiska wada hadalka waan ogsoonahay laakiin waa marka jawigiisu u ekaado mid ku habboon wakhtigaasi. Marka ay na arkaan in aanu jirno oo laba dawladood noo arkaan in aanu nahay oo la is yidhaa kuma iyo kumaa wada hadalaya, heerka meeqaam ee aynu ku wada hadlaynaa muxuu yahay. Yaa wada hadalaya dee?, ma gobol Soomaaliya ka mid ah ayaa la hadlaya Soomaaliya dawladiisii ma laba dawladood oo is qabtay baa wada hadlaya taaba yaa ka heshiiyey. Dee annagu gobolna ugu tagi mayno qolo dawladooda baryeysana ma nihin. Waar laba dawladood oo heshiiyey oo kala tagay baynu nahee ma wada hadalnaa oo ma wada noolaanaa baanu u soconaa. Wixii intaa ka hooseeya isku daalinba mayno”. Ayuu hadalkiisa ku soo gabogabeeyey Madaxweynuhu.